Ndeapi akanyanya Kubudirira Kufuridzira Maitiro Ekutungamira? | Martech Zone
Ndeapi akanyanya Kubudirira Kufuridzira Maitiro Ekutungamira?
China, November 9, 2017 Muvhuro, Ndira 18, 2021 Douglas Karr
Brian Wallace akagovana iyo Nhoroondo, Evolution, uye iro Ramangwana reKusimudzira Kushambadzira iro rakaita basa rakanakisa rekutsanangura iye anopesvedzera uye nemabatirwo aaiita navo. Ndanga ndichinyanya kutaura pamusoro pekuti mabrand anoshanda sei nevanokurudzira uye zvinopesana uye ini ndinotenda iyi infographic kubva kuMDG Kushambadza inoita rakasarudzika basa mukutsanangura hunobudirira hwehukama hwekutengesa hukama hwakataridzika.
Iyo infographic, Iyo Hurumende yeKufuridzira Kushambadzira: Izvo Zvese Brand Zvinoda Kuziva, inokurukura matekinoroji anobudirira uye nzira dzekukwezva kushambadzira.
Yakawanda Inobudirira Kufuridzira Kushambadzira Tactics
https://martech.zone/neverbounce-referralKuenderera mberi kwehumiriri - parizvino, ndine ambassadorship inoenderera Agorapulse. Inogona kunge iri yeimwe yehukama hwakanakisisa hwandakambove nahwo nemuchina. Ini ndakateedzera hukama naAgorapulse mushure mekunge ndanetsekana nemamwe mapuratifomu enhau kana ndichigadzirisa huwandu hwemagariro enhau. Iyo yekushandisa interface inoshanda zvakanyanya senge runyorwa rwebasa kana inbox, uko zvikwata zvako zvinokwanisa nyore kubata kudyidzana kwekunze. Iko kusanganiswa kwekusvika kwangu uye kuda kwangu kwechigadzirwa chavo kwakavhura musuwo apo Emeric nechikwata chake vakandinyorera kuchirongwa cheMumiriri. Pasina kumanikidzwa, uye kuburitswa zvizere, ndinotaura nezveAgorapulse kana vanhu vachitsvaga chikuva chekutungamira vezvenhau.
Chigadzirwa Ongororo - Shure akanditumira an MV88 maikorofoni ye iPhone yangu rinenge gore rapfuura kuyedza. Tarisiro yacho ndeyekuti ini ndaizogovera yangu ongororo online uye ndozodzosera maikorofoni. Shure akaziva kuti vane chigadzirwa chinonakidza uye vaida kushambadzira kuburikidza neve podcasters vane simba. Zvakanaka, ndakada maikorofoni zvakadzama zvekuti ndinoramba ndichiratidza kune wese munhu ... uye ndakabvunza Shure kana ndichigona kuichengeta.
Brand Mentions - Usamborega ikambani inobatsira mabhizimusi kuchengetedza yavo dhatabhesi yeemail yakajeka kune adhiresi anonetsa ayo anogona kukanganisa maitiro avo ekupinda mubhokisi rebhokisi revanyori vavo. Ndine chinyorwa, Sei, Sei, uye kupi Kwamunogona Kuonesa Emega Kushambadzira Lists Pamhepo, izvo zvinogara zvichiraviwa nevaverengi nechinangwa chekutsvaga mhinduro dzakadai kuti Neverbounce isvike. Mushure mekuyedza chikuva chavo pamwe nevamwe, ndaiziva kuti vane chigadzirwa chakanakisa kunze uko, saka ndakagamuchira mukana wekuti varatidze zvakanyanya basa ravo pane iyo positi. Isu, chokwadika, zvakare tinoratidzira kuzara kuzere.
Chiitiko Chiitiko - Nebhuku redu uye yedu inotakurika studio, ini ndinowanzo bvunzwa kuvhara zviitiko mukuchinjana kubhadhara, kufamba, uye mari kune zviitiko. Pachiitiko ichocho, tinoburitsa zvinyorwa, zvinyorwa zvinyorwa, kuita Facebook Live zvikamu, uye kurarama-tweet zviitiko. Ndatounza vashandi kuti vagadzire mabrochure ekusimbisa kutumira tsamba kumba kune vanoenda mushure mezviitiko. Nguva pfupi yapfuura, ndakaita izvi kuDell World kwandakabatana naMark Schaefer pane yavo Luminaries podcast. Chiitiko chinoshamisa uye mukana. Kunze kwekukwira pachikuva, iyi ndiyo nzira yangu yepamwoyo yekusangana nemusangano!
Sponsored Content - Kunyange ini ndisina basa nezvakatsigirwa zvemukati, ini ndiri wekusarudza nezve makambani ane mudiwa naye. Ivo zvechokwadi vanofanirwa kuve vatungamiriri muchikamu chavo chemusika uye vanopa kukosha kune vedu vaverengi, vateereri, uye vateveri. Kana ikaisa zita rangu panjodzi, ini handizozviita. Ini ndadzora tani yemakambani pasi pamusoro pemakore nekuti ini ndaisakwanisa kutsigira kambani kana chigadzirwa. Iwe unowanzo kuwana zvinotsigirwa zvemukati munzira ye kushambadza zviitiko zvatinogovana.
Vatengesi vanoti zvirimo zvinobudirira zvinobva kune vanovimbika, vane ruzivo rwevanokurudzira. Ehe, ini ndinobvumirana neizvi. Ini ndinotenda vanovimbika, vane ruzivo vanokurudzira vakapedza makore, pamwe makumi emakore, vachivaka masimba avo muindasitiri yavo. Nekudyara kwakadai, havangango nyore kuzviisa kunze kuti vatengese kune akakwirira kukwikwidza. Ndine chokwadi chekuti ndinogona kupetwa kana katatu kukosheswa kwandinoita kwekushambadzira mari, asi ini handingazviite ndichirasikirwa neruremekedzo nevaverengi vangu. Izvo zvandinobhadharwa necheni hazvienzanise nekuedza kwazvakaita kwandiri kuti ndive nekuvimbika kwangu, uye ini handizozviisa panjodzi.
Iyo Hurumende yeKufuridzira Kushambadzira: Chii Chakatombo Brand Inofanirwa Kuziva
Tags: kushambadzira kushambadzirakukurudzira kushambadzira infographicinfographicmdg kushambadzamdgkushambadzamamiriro ekushambadzira kushambadzira
Vanhu Chaizvoizvo Vanofanirwa Kuzvibata Nani paSocial Media